दुवै पुस्तामा दृष्टिभ्रम- विचार - कान्तिपुर समाचार
देशको भविष्यको चिन्ता गर्ने त एउटा नभए अर्को भइहाल्छ । तर कांग्रेस नेताहरू आफ्नै भविष्यप्रति यति धेरै उदासीन किन हुन सक्छन् ?
भाद्र ५, २०७५ विष्णु सापकोटा
काठमाडौँ — निर्वाचनबाट खुम्चिएको र प्रतिपक्षी दलका रूपमा समकालीन समाजका मुद्दाको नेतृत्व गर्ने धेरै सान्दर्भिकता नदेखाएको हालको नेपाली कांग्रेसको अवस्थिति राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विमर्श गर्न त्यति रोचक र महत्त्वपूर्ण छैन । तर कांग्रेसको यही स्थिति नेपालका दल र तिनका प्रत्यक्ष लाभग्राहीको चरित्र बुझ्नका लागि प्राज्ञिक रूपमा सबैभन्दा रोचक र अर्थपूर्ण छ ।
दुनियाँमा धेरै कम देश होलान्, जहाँ कुनै एउटा मुद्दामा सरकार अलोकप्रिय भएको हुन्छ, तर त्यही अलोकप्रिय मुद्दा विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल आन्दोलित भयो भने फेरि उल्टै सरकारलाई फाइदा पुग्छ । किनकि न जनताले उसलाई प्रतिपक्षीका रूपमा बुझ्न चाहेका छन्, न उसले आफूलाई भित्रैदेखिको प्रतिपक्षी ठान्छ ।
उदाहरण धेरै छन् । तर दुइटाको संक्षिप्त चर्चामार्फत यस आलेखको मूल ‘थेसिस’तर्फ प्रवेश गराैं । पछिल्लो पटक डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले जब उचाइ लिँदै थियो, त्यसमा नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध तरुण दल पनि सडकमा मिसियो । त्यसपछि केसीको सत्याग्रही आन्दोलनका पक्षमा लागेका धेरैले एकपटक अडिए र सोच्न थाले : कांग्रेस नै सामेल हुनथालेपछि कतै यो आन्दोलन नै गलत त होइन ? आन्दोलन गलत थिएन र धन्न यो सफल पनि भयो ।
तर तुलनात्मक रूपमा बौद्धिक र कुनै दलप्रति तीव्र आशक्ति भाव नदेखाउने नागरिक वृत्तभित्र अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कस्तो ‘इमेज’ राख्छ भन्ने बुझ्न यो परिघटना निकै उपयोगी थियो । दोस्रो उदाहरण, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीलाई प्रधान–न्यायाधीशमा स्वीकृत नगर्नेतर्फ संसदीय सुनुवाइ समिति अग्रसर हुँदै थियो । विगत र विवादका कारण जोशी कमजोर हुँदाहुँदै पनि कतिपयले सोच्न थालेका थिए : कतै यो दुई तिहाइको ‘कम्युनिष्ट’ सरकारले अदालतभित्र खेल्न त खोजेको होइन ? पंक्तिकारको विश्लेषणमा, जोशीलाई नै बनाउनुपर्छ भनेर जब नेपाली कांग्रेस कस्सिन थाल्यो, तब कम्युनिष्ट गठबन्धनको दुई तिहाइ भएको संसदीय समितिलाई जोशीलाई अस्वीकार गर्न झन् सजिलो भयो । किनकि ती ‘कतिपय’लाई फेरि लाग्यो– शेरबहादुर देउवाले गलत छ भनेपछि कतै यो कुरा सही त होइन ?
अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वले के कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने देखाउने यत्रो ठूलो ‘इमेज’ फेरि उक्त दलले साना दु:खले आज्र्याको होइन । त्यसमा देउवा चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका पुरानादेखि सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका ताजा घटना र शैलीमात्र होइन, पार्टीमा वरिष्ठतम पदमा बसेका कम्तीमा सात–आठजना ‘शीर्ष’ तहका नेताहरूको समेत वर्षौंको मिहिनेत, लगानी र योग्यताले पार्टीलाई यो स्थानमा पुर्‍याउन सफल भएको हो । यो त सामान्य चित्रणमात्र हो ।
तर खास रोचक विषय यहीं नेरबाट सुरु हुन्छ : यति सबै हुँदा पनि, यत्रो चुनावी पराजय र त्यसपछिको प्रतिपक्षी भूमिकाको समेत यो हाल हुँदा पनि त्यो दलका नेता र सदस्यहरू किन अझै ‘आफ्नो’ केही नबिग्रेको जस्तोगरी हिँड्न–बोल्नसकेका छन् ? मानिलिउँm, देशको भविष्यबारे कांग्रेसले लिनुपर्ने जति चिन्ता इतिहासमै लिइसकेको छ र अब त्यो चिन्ता गर्ने जिम्मेवारीमा अरू नै कोही आएका छन् । तर अब पनि यही र यस्तै नेतृत्वमा रह्यो भने यो पार्टीको हाल के होला ?
आफ्नो सम्पूर्ण पेसै राजनीतिमात्र भएका भनिएकाहरूले दलसँग जोडिएको आफ्नै भविष्य अनिश्चित भएको के साँच्चै नदेखेका कि नदेखे जस्तो गरेका हुन् ? देशको भविष्यको चिन्ता गर्ने त एउटा नभए अर्को भइहाल्छ । तर मानिसहरू आफ्नै भविष्यप्रति यति धेरै उदासीन किन हुन सक्छन् ?
भविष्यको सम्भावित अँध्यारो उनीहरूले देख्दै नदेखेका भने होइनन् । देउवा आफैलाई सायद राम्रैसंँग थाहा छ– उनी कांग्रेस नेतृत्व आफ्नो हातमा ल्याउन सफल भएका हुन्, तर सफल नेतृत्वको गुण र सीप भएका नेता आफू होइनन् । र उनलाई सायद यो पनि थाहा छ : कांग्रेसको नेतृत्वमा उनी रहुन्जेल यो पार्टीको भविष्य त्यति राम्रो छैन । तर अहिले उनी आफूसंँग विकल्प नभएको स्थितिमा छन् । उनी सभापति रहिरहँंदा (सायद अर्को कार्यकाल पनि) कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुने छैन ।
त्यसबाट उनले गुमाउने भनेको के हो ? उनी सायद फेरि प्रधानमन्त्री हुनपाउने छैनन् । मानौं, उनले आफ्नो अयोग्यता स्वीकारेर पार्टीको नेतृत्वमा युवा र सक्षम व्यक्ति ल्याउन चाहे रे । त्यसबाट उनले गुमाउने के हो ? फेरि पनि उनी प्रधानमन्त्री हुनपाउने छैनन् । नयाँ नेतृत्व आएर कांग्रेस पहिलो पार्टी भयो भने प्रधानमन्त्री पनि नयाँ व्यक्ति नै हुनेछ । तसर्थ देउवाले पार्टी नेतृत्वमा बसिराखेर जे गुमाउनेवाला छन्, त्यो नेतृत्व छाड्दा त्यसै गुम्नेवाला छ । वर्तमान सभापति भएको र चार पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका कारणले देउवाको सन्दर्भसंँग जोडेर यो विषयको चर्चा गरिएको हो । तर पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा अरू पनि थुप्रै छन्, जो अयोग्यतामा देउवा स्वयंसँग दह्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।
लाग्छ, हालको कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका शीर्षहरूमध्ये धेरै एउटा कुरामा प्रस्ट छन् : उनीहरूले नेतृत्व कब्जा गरिरहँंदा पार्टी प्रजापरिषद् नै हुन्छ भने पनि ठिकै छ । कांग्रेसको भविष्यका लागि भनेर देउवाको त के कुरा, पार्टी वरियताको बीसौं नम्बरमा भएको कोही ‘अग्रज’ नेताले समेत बरु आफ्नो राजनीति सकिएकोमा पछुतो मान्ने छैन, तर ‘मिडियाले हिरो बनाएको’ कोही भर्खरको युवालाई आफ्नो सभापति मान्ने हीनताबोध उसले स्वीकार्नेवाला छैन । पार्टीको नेतृत्व सक्षम ठाउँमा पुग्यो भने आफ्नो पनि राजनीतिक भविष्य ठिकै हुन्छ भन्ने उनीहरूमध्ये धेरैलाई थाहा भने छ । तर त्यति भविष्यका लागि भनेर आफूभन्दा धेरैपछि राजनीति सुरु गरेको कसैलाई आफ्नो नेता मान्न कोही तयार छैनन् ।
रमाइलो के छ भने पछिल्लो पुस्ताको बाटो कस्तो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अघिल्लो पुस्ताको भन्दा पनि अन्यमनस्कपूर्ण छ । उनीहरूमध्ये धेरै अहिले पनि समकालीन वा आफूपछिका कसैलाई नेता मानेर आफ्नो र पार्टीको भविष्य सुदृढ गर्नुभन्दा बरु पुरानै मध्येका कोहीसँंग गुटमा टाँसिँंदा आफ्नो ‘आत्म–सम्मान’ जोगिने ठान्छन् । पुरानो पुस्ताबाट नयाँमा ल्याउनासाथ आफ्नो राजनीतिको सुरक्षा हुने स्वार्थ देख्न उनीहरू असमर्थ छन्, जसलाई यस लेखले पछिल्लो पुस्ताको दृष्टिभ्रम भनेको हो ।
एक–दुईवटा विषयहरू तार्किक रूपमा हेर्दा अकाट्य भएर स्थापित भएका छन् । तर सम्बन्धित दलका दृष्टिभ्रमले यी सपाट सत्यलाई पनि देख्नसकेका छैनन् । जस्तो– धेरै वर्षसम्मको निकम्मापनबाट बिग्रेको नेताको छवि अचानक सुध्रेर फेरि गतिलो देखिन इतिहासले ठूलै हस्तक्षेप गरेमात्र सम्भव छ ।
५० को दशकमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छवि यसरी बिग्रेको थियो कि राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा नलिएको भए र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने भूमिकामा नपुगेको भए २०६२/०६३ पछिको उनको ‘कमव्याक’ सम्भव थिएन । इतिहासले फेरि त्यस्तै हस्तक्षेप देउवा वा रामचन्द्र पौडेल वा उनीहरूका हाराहारीमा रहेर काम गरिरहेका नेताका पक्षमा गरिदेला जस्तो लाग्दैन । तसर्थ अब यी नेताले अहिलेसम्म नदेखाएको करिश्मा देखाउलान् र ‘कमव्याक’ गर्लान् भनेर कसैले आस गरेको छ भने त्यो पूरा हुनेवाला छैन ।
अब त हुँदाहुँदा बीसौं वर्षसम्म राज्यसत्तामा वरिपरि देखिइरहेका नेताहरूका मुखमार्फत कुनै राम्रै कुरा आयो भने पनि फेरि तिनै पुराना नेताका कुरा न हुन् भनेर त्यसलाई समाजले गम्भीरतासाथ नलिने जोखिम बढेको छ । त्यसमाथि अहिलेसम्म कुनै भन्ने विषय भएको ठाउँमा पनि राम्रो भाष्य बनाएर जनतालाई व्याख्या गर्न असफल नेतृत्वले अब यो उमेरमा त्यो सीप सिकेर आफूलाई सुधार्ला भनेर अपेक्षा गर्नु अर्थहीन हो ।
अहिले संसद्को प्रतिपक्षमा प्रदीप गिरी र गगन थापा लगायतका दुई–चार जनाले बोलेको विषय बाहेक अरूले राम्रै तर्क राखेका रहेछन् भने पनि त्यसले मिडियामा ठाउँ पाउँदैन । त्यसको पछाडि पनि केही त कारण होला भनेर सोच्ने इच्छाशक्ति नेतृत्वमा हुने कुरै भएन । यस्तो स्थितिको कांग्रेसमा नयाँ ऊर्जावान, बौद्धिक र सिर्जनशील युवाहरू प्रवेश गर्लान् र दलले आफूलाई रूपान्तरण गर्ला भनेर कल्पना गर्नु कल्पनाशीलताप्रतिकै अन्याय हो ।
एउटा सशक्त लोकतान्त्रिक दलको रूपमा केही दशकसम्म आफ्नो भूमिका खोज्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सशक्त रूपमै ध्रुवीकृत हुन जरुरी छ । एउटा यस्तो ध्रुवीकरण जसले अहिले नेतृत्व गरिरहेको पुस्ताबाट नेतृत्व पूर्णरूपमा आफ्नो पुस्तामा सार्न सकोस् र त्यसपछि आफूमध्येबाट नयाँ नेतृत्व छानोस् । र त्योसंँगै दलमा अहिले जसरी नियन्त्रित सदस्यता वितरण गरेर देशभरिका सबै तहका नेतृत्वमा गुटहरूको कब्जा हुन्छ, त्यो चंगुलबाट पार्टीलाई मुक्त गरेर वास्तविक अर्थमै ‘मास–बेस्ड’ पार्टी बनोस् ।
नत्र कतिपय कांग्रेसीले नै भन्छन् नि– ‘हाम्रो पार्टीको अरूले किन चिन्ता गरिराख्नुपर्ने’ † त्यसपछि चाहिँं आफ्नो चिन्ता अरूले गरे भनेर पनि गुनासो गर्नुपर्ने छैन । अरूले चिन्ता गर्नका लागि त्यतिबेलासम्म अरू नै पार्टी आइसकेका हुन सक्छन् । प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०८:०२